I-ESRI Venezuela eno-Edgar Díaz Villarroel weTwingeo 6th Edition - iGeofumadas
I-ESRI Venezuela eno-Edgar Díaz Villarroel weTwingeo 6th Edition
Meyi, 2021 eziningana
Okokuqala, umbuzo olula kakhulu. Kuyini ukuhlakanipha kwendawo?
I-Location Intelligence (LI) itholakala ngokubona kanye nokuhlaziywa kwedatha ye-geospatial ukuthuthukisa ukuqonda, ulwazi, ukwenza izinqumo nokubikezela. Ngokwengeza izendlalelo zedatha, njengezibalo zabantu, ithrafikhi, nesimo sezulu, kumephu ehlakaniphile, izinhlangano zithola ubuhlakani bendawo njengoba ziqonda ukuthi kungani izinto zenzeka lapho zenzeka khona. Njengengxenye yenguquko yedijithali, izinhlangano eziningi zithembele kubuchwepheshe be-geographic information systems (GIS) ukudala ubuhlakani bendawo.
Njengoba ubonile ukwamukelwa kwe-Location Intelligence ezinkampanini ezincane nezinkulu, kanye nokwamukelwa kwayo ezingeni likaHulumeni / likaHulumeni. Ukwamukelwa kwe-Location Intelligence ezinkampanini ezinkulu nezincane kube kuhle kakhulu, okube nomthelela ekwandisweni kwe-GIS nokusetshenziswa ngabantu bemisebenzi engeyona eyezendabuko, kithina kuyamangalisa ukuthi sisebenza kanjani nababhange, onjiniyela bezimboni, odokotela, njll. Abasebenzi okwakungeyona inhloso yethu njengabasebenzisi ngaphambili. Ngenxa yenkinga yezepolitiki kanye nokushoda kwemali, uHulumeni / uHulumeni akakamukelwanga kahle.
Ngabe ucabanga ukuthi ngesikhathi sobhadane lwamanje, ukusetshenziswa, ukusetshenziswa nokufunda kwe-geotechnologies kube noshintsho oluhle noma olubi?
IGeotechnologies ibe neqhaza elihle futhi elibalulekile ekulweni negciwane, izinkulungwane zezinhlelo zokusebenza zenziwe emazweni amaningi ukusiza, ukuqapha nokwenza izinqumo ezihamba phambili. Kukhona izinhlelo zokusebenza ezifana nalezi ezivela eJohns Hopkins University Institute namuhla ezivakashelwa ngezigidigidi ezi-3. Ideshibhodi yeVenezuela neJHU
U-Esri wethule i-COVID GIS Hub, ingabe lobu buchwepheshe bungasiza ukulwa nezinye izifo eziwubhadane esikhathini esizayo?
ArcGIS HUB es un extraordinario centro de recursos para localizar todas las apps en un solo lugar y descargar datos para análisis en vivo, en este momento prácticamente hay una HUB del COVID para cada País, Sin duda esta herramienta tan versátil y de inmediata disponibilidad va a ayudar en otras pandemias, ya que tendrá información abierta para toda la comunidad científica, medica y cualquier otra persona interesada en ayudar.
Ngabe ucabanga ukuthi ukusetshenziswa okukhulayo kwe-geotechnologies kuyinselelo noma kuyithuba?
Kuyithuba ngaphandle kokungabaza, ukubheka yonke imininingwane, linikeza amathuba okuhlaziya okuvumela ukuthi usebenze kahle kakhulu futhi uhlakaniphe futhi lokhu kuzobaluleke kakhulu kuleliqiniso elisha.
Ngabe ucabanga ukuthi kunomehluko omkhulu ekuhlanganisweni kobuchwepheshe be-geospatial eVenezuela maqondana nomhlaba wonke? Ngabe inkinga yamanje ithonye ukusetshenziswa noma ukuthuthukiswa kwe-geotechnologies?
Akungabazeki ukuthi kukhona umehluko ngenxa yenkinga yamanje, ukungabi khona kotshalomali ezinhlanganweni zikahulumeni kube nomthelela omubi kakhulu, ngokwesibonelo emisebenzini yomphakathi (Amanzi, Ugesi, iGesi, Ucingo, i-Intanethi, njll.) Bavela kuhulumeni, abanabo ubuchwepheshe be-geospatial futhi usuku ngalunye lokubambezeleka oludlula ngaphandle kokwenza lokhu kufakwa izinkinga ziqongeleleka futhi insizakalo ayenzi uma ingabi kubi kakhulu, ngakolunye uhlangothi izinkampani ezizimele, (ukwabiwa kokudla, iselula, ezemfundo, ukumaketha, Amabhange, ezokuphepha, njll) basebenzisa ubuchwepheshe be-geospatial kahle kakhulu futhi ulingana nawo wonke umuntu.
Kungani i-ESRI iqhubeka nokubheja eVenezuela? Yibuphi ubudlelwane noma ukubambisana onakho futhi yikuphi okuzayo?
Singu-Esri Venezuela, besingumsabalalisi wokuqala wakwa-Esri ngaphandle kwase-United States, sinesiko elihle ezweni, senza amaphrojekthi ayisibonelo kuwo wonke umhlaba, sinomphakathi omkhulu wabasebenzisi abahlala bebala kithi nokuthi ukuzibophezela kubo kuyasikhuthaza. Kwa-Esri siqinisekile ukuthi kufanele siqhubeke nokubheja iVenezuela nokuthi ukusetshenziswa kwe-GIS yikhona okuzosiza kakhulu ekwakheni ikusasa elingcono.
Mayelana nemifelandawonye nokusebenzisana, sinohlelo oluqinile lwabalingani bezamabhizinisi ezweni, esivumele ukuthi sisebenze kuzo zonke izimakethe, siyaqhubeka nokufuna ozakwethu abasha kwezinye izindawo zobungcweti. Basanda kubamba i- "Smart Cities and Technologies Forum". Ungasitshela ukuthi yini iSmart City, ingabe iyafana nedolobha ledijithali? Futhi ucabanga ukuthi yini iCaracas ebingayintula - ngokwesibonelo - ukuze ibe yiSmart City
I-Smart City yidolobha elisebenza kahle kakhulu, ibhekisa ohlotsheni lwentuthuko yasemadolobheni olususelwa entuthukweni esimeme ekwazi ukuphendula ngokwanele izidingo eziyisisekelo zezikhungo, izinkampani kanye nezakhamizi uqobo, zombili ngokwezomnotho, njengakwezokusebenza, kwezenhlalo nezici zemvelo. Akufani nokuthi iDigital City ukuvela kweDigital City, kuyisinyathelo esilandelayo, iCaracas iDolobha elinosodolobha abahlanu balaba kukhona aba-5 abasendleleni yokuba yiSmart City esiqhubeka babaqondise kuHlelo, Ukuhamba, Ukuhlaziywa nokuphathwa kwedatha nokubaluleke kakhulu ekuxhumaneni nezakhamizi. I-ArcGIS Hub Venezuela
Yini, ngokusho kwenqubo yakho, obaluleke kangakanani ubuchwepheshe be-geotechnologies ukufeza uguquko lwedijithali lwamadolobha? Yiziphi izinzuzo ubuchwepheshe be-ESRI ezinikela ngokukhethekile ukufeza lokhu?
Kimi, okuthile okubalulekile ukufeza ukuguqulwa kweDijithali ukuthi kube nokubhaliswa kwedijithali futhi kutholakale kunoma iyiphi indawo, isikhathi kanye nedivayisi, kulerejista yonke imininingwane edingekayo izokwaziswa kwezokuThutha, ubugebengu, imfucuza eqinile, ezomnotho, ezempilo nokuhlela, Izehlakalo, njll. Lolu lwazi luzokwabiwa nezakhamizi futhi luzobucayi kakhulu uma lungezona izinto ezisezingeni futhi lusezingeni elifanele. Lokho kuzosiza ukwenza izinqumo ngesikhathi sangempela nokuxazulula izinkinga zomphakathi. Thina kwa-Esri sinamathuluzi athile esigabeni ngasinye ukufeza inhloso yokuguqulwa kwedijithali.
Kule nguquko yesine yezimboni, eletha nenhloso yokusungula ukuxhumana okuphelele phakathi kwamadolobha (i-Smart City), ukumodeliswa kwezinhlaka (amawele edijithali) phakathi kwezinye izinto, i-GIS ingena kanjani njengethuluzi elinamandla lokuphatha idatha? Abaningi bacabanga ukuthi i-BIM iyona efaneleke kakhulu kuzinqubo ezihlobene nalokhu.
U-Esri no-Autodesk banqume ukuhlanganyela ukwenza lokhu kube yiqiniso i-GIS ne-BIM kuhambisane ngokuphelele ngalesi sikhathi, sinokuxhumana kwethu nezixazululo kwithambo le-BIM futhi lonke ulwazi lungalayishwa kuzinhlelo zethu zokusebenza, lokho okulindeleke abasebenzisi ukuthi kube ngokoqobo lonke ulwazi nokuhlaziywa endaweni eyodwa kungenzeka namuhla nge-ArcGIS.
Ngabe ucabanga ukuthi i-ESRI isondele kahle ekuhlanganisweni kwe-GIS + BIM?
Yebo, kubonakala kimi ukuthi nsuku zonke nezixhumi ezintsha phakathi kobuchwepheshe, ukuhlaziywa okungenziwa kusimangaza ngendlela enhle kakhulu. Njengoba ubonile ukuvela maqondana nokusetshenziswa kwezinzwa zokuthwebula idatha ye-geospatial. Siyazi ukuthi amadivayisi omakhalekhukhwini ahlala athumela imininingwane ehambisana nendawo. Yini ukubaluleka kwedatha esiyivezayo ngokwethu, ingabe iyinkemba esika nhlangothi zombili?
Yonke imininingwane eyenziwe ngalezi zinzwa iyathakazelisa kakhulu, esivumela ukuthi sihlaziye imininingwane eminingi mayelana namandla, ezokuthutha, ukugqugquzela izinsiza, ubuhlakani bokufakelwa, ukubikezelwa kwesimo, njll. Kuhlala kunokungabaza uma lolu lwazi lusetshenziswa ngendlela engafanele lungaba yingozi, kepha ngokuqinisekile kunezinzuzo eziningi zedolobha nokwenza likwazi ukutholakalela thina sonke esihlala kulo.
Izindlela namasu wokutholwa kwedatha nokuthwebula manje aqondiswe ekutholeni ulwazi ngesikhathi sangempela, ukusebenzisa ukusetshenziswa kwezinzwa ezikude ezinjenge-drones, akholelwa ukuthi kungenzeka ngokusetshenziswa kwezinzwa ezifana neziphuphutheki kanye ne-radar, inothi lokho ulwazi alusheshi.
Imininingwane yesikhathi sangempela yinto efunwa yibo bonke abasebenzisi futhi cishe lokho kunoma isiphi isethulo esingumbuzo oyisibopho umuntu anquma ukusibuza, ama-drones asize kakhulu ukunciphisa lezi zikhathi futhi, ngokwesibonelo, sinemiphumela emihle kakhulu yokuvuselela i-cartography kanye amamodeli wokuphakama, kepha ama-drones asenemikhawulo ethile yezindiza nezinye izingqinamba zobuchwepheshe ezenza iziphuphutheki kanye ne-radar kusengukukhetha okuhle kwezinye izinhlobo zomsebenzi. I-hybrid phakathi kobuchwepheshe obubili ilungile. Njengamanje sekuvele kukhona iphrojekthi esebenzisa iziphuphutheki ezisezingeni eliphansi ukuqapha umhlaba ngesikhathi sangempela usebenzisa ubuhlakani bokuzenzela. Okukhombisa ukuthi iziphuphutheki zinesikhathi eside ukuzisebenzisa.
Yikuphi ukuthambekela kobuchwepheshe okuhlobene nensimu ye-geospatial okwamanje okusebenzisa amadolobha amakhulu? Isenzo kufanele siqale kanjani ukufinyelela kuphi kulelo zinga?
Las grandes Ciudades prácticamente todas ya tiene un GIS, este realmente es el inicio, tener un excelente catastro con todas las capas necesarias en una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) que sea colaborativa entre los diferentes departamentos que conviven en una ciudad donde cada departamento es propietario de capas de las cuales es responsable de tener actualizadas, esto ayudara al Análisis, Planificación y la conexión con los ciudadanos.
Ake sikhulume nge-Academia GIS Venezuela, ngabe yamukelwe kahle? Yimiphi imigqa yocwaningo okunikezwa yizemfundo?
Yebo, thina e-Esri Venezuela sihlatshwe umxhwele ukwamukelwa kwezethu Isikole se-GISSinezifundo eziningana masonto onke, abaningi ababhalisile, sinikeza zonke izifundo ezisemthethweni ze-Esri, kepha ngaphezu kwalokho sidale ukunikezwa kwezifundo ezenzelwe wena eGeomarketing, Environment, Petroleum, Geodesign naseCadastre. Siphinde sakha amakhono kulezo zindawo ezivele zinezinkantolo eziningana zeziqu. Njengamanje sinezifundo ezintsha kumkhiqizo we-ArcGIS Urban ophelele ngeSpanish nangesiNgisi, owenziwe ngokuphelele e-Esri Venezuela futhi osetshenziselwa ukuqeqesha abanye abasabalalisi eLatin America. Amanani ethu asekela kakhulu.
Ngabe ucabanga ukuthi ukunikezwa kwezemfundo ukuqeqeshwa kochwepheshe be-GIS eVenezuela kuhambisana neqiniso lamanje?
Yebo, ukufunwa okukhulu esinakho kuyakufakazela, Izifundo zethu zenziwe ngokwalokho okudingekayo ngalesi sikhathi eVenezuela, amakhono adalwa ngokuya ngezidingo zabasebenzi bezwe, bonke labo abaqedela amakhono baqashwa ngokushesha noma thola ukunikezwa komsebenzi ongcono.
Ngabe ucabanga ukuthi ukufunwa kochwepheshe abahlobene kakhulu nokuphathwa kwedatha yendawo kuzobe kuphakeme kakhulu esikhathini esizayo esiseduze?
Yebo, lokho sekuvele kuyinto ekhona namuhla, imininingwane ibaluleke kakhulu nsuku zonke ukuthi yenzeke kuphi noma ikuphi futhi esivumela ukuthi sisebenze kahle futhi sihlakaniphe, kwenziwa ochwepheshe abasha, ososayensi bedatha (i-data Science) nabahlaziyi (i-Spatial Analyst) futhi nginesiqiniseko sokuthi ngokuzayo ulwazi oluningi luzokwakhiwa oluzothathwa ngokulandelana kwemvelaphi futhi kuzodingeka abantu abaningi abakhethekile ukuze basebenze ngalolo lwazi
Ucabangani ngokuncintisana okungapheli phakathi kobuchwepheshe bamahhala be-GIS.
Umncintiswano ubonakala uphilile kimi ngoba lokho kusenza silwele, sithuthukise futhi siqhubeke nokwenza imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu. I-Esri ihambisana nawo wonke ama-OGC Amazinga, Ngaphakathi kokunikezwa kwethu komkhiqizo kunemithombo eminingi evulekile nemininingwane evulekile
Ziyini izinselelo zekusasa ngaphakathi komhlaba we-GIS? Futhi yiluphi ushintsho olubaluleke kakhulu oselulubonile selokhu lasungulwa?
Ngaphandle kokungabaza, kunezinselelo okufanele siqhubeke nokuzithuthukisa, Isikhathi sangempela, ubuhlakani bokufakelwa, i-3D, Izithombe nokubambisana phakathi kwezinhlangano. Ushintsho olubaluleke kakhulu engilubonile kube ukukhuliswa kokusetshenziswa kwepulatifomu ye-ArcGIS kuzo zonke izimboni, kunoma iyiphi indawo, idivayisi nesikhathi, besiyi-software ekwaziyo ukusebenzisa abasebenzi abakhethekile kuphela, namuhla kunezinhlelo zokusebenza noma ngubani ingaphatha ngaphandle kokuba nohlobo oluthile lokuqeqeshwa noma imfundo yangaphambilini.
Ngabe ucabanga ukuthi idatha yendawo izotholakala kalula ngokuzayo? Uma ucabanga ukuthi ukuze lokhu kwenzeke kumele badlule kuzinqubo eziningi
Yebo, ngiyaqiniseka ukuthi idatha yesikhathi esizayo izovuleka futhi ifinyeleleke kalula. Lokho kuzosiza ekucebiseni idatha, ukuvuselelwa nokusebenzisana phakathi kwabantu. Ubuhlakani bokufakelwa buzosiza kakhulu ukwenza lula lezi zinqubo, ikusasa ledatha yendawo lizohlaba umxhwele kakhulu ngaphandle kokungabaza.
Ungasitshela ngezivumelwano ezithile ezizohlala kulo nyaka kanye nezinye ezizayo.
I-Esri izoqhubeka nokukhula emphakathini wayo wabalingani bebhizinisi kanye nokuhlangana namanyuvesi okuzosisiza sakhe umphakathi oqinile we-GIS, kulo nyaka sizohlangana nezinhlangano zamazwe amaningi, izinhlangano eziphethe usizo losizo kanye nezinhlangano ezikuqala ulayini usiza ekunqobeni ubhadane lwe-COVID-19.
Noma yini enye engingathanda ukuyifaka
E-Esri Venezuela sineminyaka esisohlelweni lokusiza amaNyuvesi, le projekthi siyibiza ngokuthi yi-Smart Campus esiqiniseka ngayo ukuthi singazixazulula izinkinga eziphakathi kwekhempasi ezifana nezinkinga zedolobha. Le phrojekthi isivele inamaphrojekthi amane aqediwe eCentral University yaseVenezuela, eSimón Bolívar University, eZulia University naseMetropolitan University. Isikhungo se-UCV, UCV 3D, I-USB Smart Campus
Le ngxoxo nezinye zishicilelwe kufayela le- Uhlelo lwesihlanu lweTwingeo Magazine. I-Twingeo isesandleni sakho ngokugcwele ukuthola izindatshana ezihlobene neGeoengineering zohlobo lwayo olulandelayo, xhumana nathi nge-imeyili editor@geofumadas.com kanye editor@geoingenieria.com. Kuze kube uhlelo olulandelayo.
Thumela Previous«Langaphambilini I-Fuzzy Logic Robotics
Post Next AMA-AMERICA WOKUHAMBA NGOKWEZOKUTHENGISAOkulandelayo »